आज (मंगलबार) घट्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कतिमा हुँदैछ कारोबार ? - Nepali in Australia
September 28, 2021 autherLeaveaComment on आज (मंगलबार) घट्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौँ । साताको तेस्रो दिन अर्थात आज (मंगलबार) नेपाली बजारमा सुनको भाउ घटेको छ। हिजो सोमबार ३ सय रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ आज भने प्रतितोला ३ सय रुपैयाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
महासंघका अनुसार, आज छापावाल सुन प्रतितोला ८९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। छापावाल सुन सोमबार प्रतितोला ८९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
त्यस्तै, आज तेजावी सुनको भाउ पनि घटेको छ। आज तेजावी सुन प्रतितोला ८८ हजार ५ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सोमबार तेजावी सुन प्रतितोला ८८ हजार ८ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ************ यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहा